Miroso Amin’ny Fandraràna Ny Tsy Fitononana Anarana Amin’ireo Fampiasa Fandefasana Hafatra Ny Parlemanta Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Miroso Amin'ny Fandraràna Ny Tsy Fitononana Anarana Amin'ireo Fampiasa Fandefasana Hafatra Ny Parlemanta Rosiana
Voadika ny 09 Jona 2017 14:57 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Italiano, Português, Español, English
Sary : Pixabay
Nankatoavin'ilay Kaomity momba ny Fampitàmbaovao sy ny Teknolojia ao amin'ny Domà ny volavolan-dalàna iray niteraka resabe izay mety handràra ny tsy fitononana anarana amin'ireo fandefasana hafatra ety anaty aterineto. Isisihan'ilay kaomity ao amin'ny Domà ny handinihana ilay volavolan-dalàna amin'ny famakiana azy voalohany, aorian'izay ilay tolodalàna dia mety hiverina ao amin'ilay kaomity hanaovana izay fanitsiana mety ilaina.
Tsy mbola nanondro andro hanaovana latsabato momba ny fandinihana voalohany ilay tolodalàna ny parlemanta. Raha lany ary voasonian'ny Filoha Poutine, mety hiditra hanankery amin'ny fiandohan'ny taona 2018 ilay lalàna.
Ny 24 May ireo solombavambahoaka ao amin'ny Domà no nampiditra ilay drafitra. Takian'ilay lalàna ny hanamarina ny mombamomba ireo mpampiasa fampitàna hafatra amin'ny fampiasàna ny laharan'ny telafaonin'izy ireo, amin'ny fitakiana ihany koa ireo mpanome tolotra finday mba hanome tànana ny governemanta amin'io ezaka io.
Sosokevitr'ilay lalàna ihany koa ny fampandoavana sazy ara-bola an'ireo fampiasa fandefasana hafatra izay manohy mamela ny fahafahana mifandray tsy mifanonona anarana ifanaovan'ireo mpampiasa, ary mety ho voabahan'ny mpanivan'ny fanjakàna ao Rosia izay mpanome tolotra mody fanina amin'ny fangatahan'ny polisy mba hanapaka ny fahafahana miditra amin'ireo kaonty tsy mitonona anarana.
Raha lany izy io, ireo fampitàna hafatra voasoratra ara-dalàna any amin'ny fanjakàna ho toy ny “mpizara vaovao” ihany no iharan'ilay lalàna. Amin'izao fotoana izao, ireo fampiasa malaza toy ny WhatsApp sy Telegram dia tsy ao anatin'ny lisitry ny fanjakàna, saingy nilaza ireo manampahefana fa tsy ela dia mety hiova io. Raha voasoratra ara-dalàna ao Rosia, mety hanelingelina ny indostrian'ny fanakianana politika ilay fandraràna vaovao hoavy, any Rosia izay kaonty maromaro ihany amin'ireo fampiasa fandefasana hafatra no lasa nalaza tato anaty fotoana fohy.
Anisan'ny RuNet Echo, tetikasan'ny Global Voices handikana ny teny Rosiana an'aterineto ity lahatsoratra ity. Lahatsoratra rehetra ·
Eoropa Afovoany & Atsinanana
Tantaran'ny Eoropa Afovoany & Atsinanana farany
3 andro izayEoropa Andrefana
4 andro izayBelarosia
Belarosia: nanapaka hevitra ireo manampahefana fa hofoanana ny toeram-pialofan'ireo niharan'ny herisetra an-tokantrano
5 andro izayRosia
Rosia: Voasakana ilay tranonkala malaza noho ny fitarainan'ny mpiasa
2 andro izayAzia Atsinanana
5 andro izayAzia Atsinanana